Granny Smith v 1.2.0 for (iphone/ipad/ipod touch) – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘိုင်းသတင်းများ
Published On: Fri, Mar 15th, 2013 iOS game များ | By ဖန်လုံး Granny Smith v 1.2.0 for (iphone/ipad/ipod touch)
Granny Smith ကသူ့ ရဲ့ အဖိုးထိုက်တန် တဲ့ပန်းခြံထဲ ကသူချစ်တဲ့ ပန်းသီးကိုသူခိုးဝင် ခိုးတဲ့အခါ Granny Smith ကစကိတ် စီးပြီး သူခိုးပန်းသီးမယူခင် ပန်းသီးကိုအရင်ယူပေးရတဲ့ Game လေးပါ. Levels တိုင်းမှာ ပန်းသီး သုံးလုံးကို သုခိုးမယူခင် Granny Smith ကအရင်ယူပြီး ပန်းတိုင် ကိုအရင် ဝင်ပေးရမှာပါ.အခန်းတိုင်း မှရရှိလာတဲ့ coins တွေနဲ့ Features အတွက် ကောင်း အောင် power ups .Characters တို့ မှဝယ်ယူနိုင်ပ ပါတယ်. Granny Smith ကိုကူညီပြီး ပန်းသီး သုံးလုံးကိုအရယူပေးချင် သူများ အောက်တွင် Download ရယူနိုင် ပါပြီ. :)
Mirror Download link:k: (Download Link) 33.6 MB
TrafficVille 3D For For iPhone/iPad/iPod 34MB
Glory of Generals For iPhone/iPad/iPod 65MB
Diner Dash Deluxe for iPhone, iPod touch, and iPad 40MB
Table Top Racing Game for iPhone, iPod and iPad (136MB)
Mical Moe on Y200 (U8655) root လုပ်နည်းAung on Unsoftbrick Method For Samsung Galaxy Devices [Tutorial]Wai Yan on Samsung Galaxy S4 ၏ Internal Memory နှင့် Micro SD Slot တွင် အားနည်းချက်များရှိနေကြောင်း Samsung ပြောကြားWunna Thaw on How to Install Myanmar Font On Samsung Galaxy S4-i9500 & i9505-(Without Rooting)zaw min on How to Install Myanmar Font On Samsung Galaxy S4-i9500 & i9505-(Without Rooting) Android Development